I-OMG ephathekayo ye-SOS Alarm enendawo ye-GPS yaBasetyhini / yaBantwana naBantu abaDala akukhoKhadi leSim elifunekayo (EA027) | I-Singapore ephezulu ye-Mini GPS Tracker ye-Autism / Autistic yaBantwana kunye neDementia yabantu abadala
I-OMG ye-SOS ephathekayo yoLuntu kunye neNdawo ye-GPS yaBasetyhini / abantwana kunye naBadala akukho Khadi le-Sim elifunekayo (EA027)
1. Isetyenziswe ngokuzimela, I-alamu ingenza i-decibel ephezulu kunye nesandi esicacisayo.
2. Hlanganisa i-alamu kunye ne-App "PPsafety". Unokuyonwabela imisebenzi epheleleyo ye-alamu efana nokukhusela ixesha, ukuxwayisa ngokukhawuleza, ukuchasana nokulahleka nokufumana, nokunye okunjalo.
3. Iyahambelana ne-IOS kunye ne-Android.
4. Ikhutshwe mahala ye-APP.
5. I-120DB isikhalazo esikhulu se-alarm sokuhlaselwa ngokukhawuleza.
6. Ukulandelelana kwexesha le-GPS.
7. I-Bluetooth 4.0 eyakhelwe ngaphakathi.
8. Umsebenzi olahlekileyo olahlekileyo.
Amandla okuLawula: DC 5V
Ixesha lokuhlawula: 30 Imizuzu
Ixesha elimisiweyo: 30 Days
Ixesha lesandi: 45 Imizuzu
battery: 140Mah i-Polymer Battery
Umbala okhoyo: I-Pink / Green / Grey
Umlinganiselo womkhiqizo: 46 * 46 * 14.8mm
Ubukhulu bePakethe: 180 * 85 * 25mm
Isisindo somkhiqizo: 18g
Vula i-Environment, Sebenzisa i-High DB Alarm
Umzekelo, xa utyeshelwe ngumfokazi. Unokukrazula ikhonkco ngaphandle, i-alamu iya kwenza isandi se-alamu ephezulu. Ngexesha elifanayo, i-alamu iya kuthumela umyalezo ofuna uncedo kumntu ochaphazelekayo oqhagamshelana naye.
Indawo eValiweyo, Sebenzisa i-Alarm eyileyo
Xa udibana nabantu ababi ekhaya okanye uthabathe iteksi, unokwenkqraza kabini iqhosha, i-alamu iya kuthumela umyalezo ofuna uncedo kwintetho yakho yokuxakeka ngaphandle kwomsindo we-alarm.
4262 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-27 Namhlanje
I-Tracker ye-Ankle yobuqu ye-Ankle enebhanti yentsimbi ivaliwe…
I-GPS051D -I-OMG ephathekayo ye-GPS yeMagnethi ye-SPY /…
Isixhobo sokuKhangela ukuSebenzisa-ukungangenisi manzi [OMGGPS09D] -…